ဂျာရတ် လီဗာပူး နည်းပြ ဖြစ်လာနိုင်လောက်တဲ့ အချိန်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆွန် - xyznews.co
ဂျာရတ် လီဗာပူး နည်းပြ ဖြစ်လာနိုင်လောက်တဲ့ အချိန်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆွန်
ပေါလ်မာဆွန်က စတီဗင်ဂျာရတ် အနေနဲ့ အက်စတွန်ဗီလာမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လာမည့် ရာသီမှာ လီဗာပူး နည်းပြရာထူးကို ရယူသွားနိုင်ဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူး ဂန္တ၀င် ကစားသမားဟာ ယခုတစ်ပတ် အစောပိုင်းက ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒင်းစမစ် နေရာမှာ ဗီလာမန်နေဂျာသစ် အဖြစ် အစားထိုး၀င်ရောက်လာသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာရတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ရိန်းဂျားကို ၁၀ နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အမှတ်ပေးဖလား ရယူပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ဗီလာနည်းပြ ဖြစ်မယ့် အခွင့်အရေး အတွက် ရာသီ၀က်မှာပဲ Ibrox ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် နည်းပြဟာ ဗီလာနဲ့ ၃ နှစ်ခွဲစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ယာဂန်ကလော့ လီဗာပူးကနေ ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ လီဗာပူးကို ကိုင်တွယ်ဖို့ အတွက် ဗီလာကို လှေကားတစ်ခု အနေနဲ့ အသုံးချခဲ့တာလို့ လူတော်တော်များများ ယူဆနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အာဆင်နယ် ကစားသမားဟောင်းက ဘောလုံးလောကရဲ့ ခန့်မှန်းလို့ မရတဲ့ သဘာဝကြောင့် ဒီအခွင့်အရေးဟာ ထင်ထားတာထက် စောရောက်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
မာဆွန်က “အက်စတွန်ဗီလာဟာ စတီဗင်ဂျာရတ် အတွက် လှေကားထစ် တစ်ခုပါ။ အကယ်၍ သူ ဗီလာမှာ ကောင်းကောင်း လုပ်ပြနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် လာမည့်နှစ် ဒီလို အချိန်မှာ သူဟာ အန်ဖီးမှာ ရှိနေနိုင်လောက်ပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဂျာရတ်ဟာ တစ်နေ့မှာ လီဗာပူး မန်နေဂျာ ဖြစ်လာမှာပါ။ သူဟာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ဆိုတာ အသေအချာ ပါပဲ။ သူ့မှာ အစီအစဉ် ရှိနေပါတယ်။ ဗီလာဟာ ဒီခရီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါပဲ။
ဘောလုံးမှာ အရာအားလုံး လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲတက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီအချိန်မှာ ဒင်းစမစ် ဗီလာနည်းပြ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်သလားလို့ ခင်ဗျားတို့ လာမေးခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီလို ဖြစ်စရာ လုံး၀ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော် ပြန်ပြောခဲ့မှာပါ။ အရာအားလုံးဟာ timing ကိုက်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ လီဗာပူး လာမည့် ရာသီအစကို ဆိုးဆိုးရွားရွား စတင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ယာဂန်ကလော့ဟာ ရုတ်တရတ်ကြီး ကလပ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လီဗာပူးတို့ ဘယ်သူကို နည်းပြရာထူး ခန့်အပ်သွားမှာလဲ?
အကယ်၍ ဂျာရတ်သာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဗီလာနဲ့ အတူ ကောင်းကောင်း လုပ်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လီဗာပူးတို့ ပထမဦးဆုံး ချိတ်ဆက်သွားမယ့် သူဟာ ဂျာရတ်ပါပဲ။ ဒါဟာ ရိန်းဂျားမှာထက် အများကြီး ပိုမို ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုက တအား ပြင်းထန်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာရတ် အတွက်ကတော့ ကောင်းမွန်မှု မရှိတဲ့ အစပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကစားသမားတွေဟာ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေ သွားရောက် ကစားနေတာကြောင့် သူ့အတွက် ပြင်ဆင်ချိန် သိပ်ရမှာ မဟုတ်လို့ပါ။
သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ဟာ ဘရိုက်တန်နဲ့ ခက်ခဲတဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသင်းကောင်း ဖြစ်ပေမယ့် လူတွေကတော့ ဗီလာပက်မှာ သူတို့ပဲ အနိုင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်နေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဂျာရတ်ရဲ့ ပွဲဦးထွက်မှာ ဖိအားတွေ မျှော်လင့်ထားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဗီလာဟာ ဒီရာသီ top6ထဲ ၀င်မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ အကယ်၍ အာဆင်နယ် နဲ့ တော့တင်ဟမ် တို့ ရုန်းကန် နေရမယ်ဆိုရင် ဗီလာတို့ ဒီနေရာကို ရယူဖို့ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ? ဂျာရတ် အနေနဲ့ အသင်းကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးကာ တန်းဆင်းအန္တရာယ် မကြုံရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးရမှာပါ။ အကယ်၍ သူတို့ ဇယားလယ်မှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂျာရတ် ကောင်းကောင်း လုပ်ပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။”
Previous Article ငွေကြေးနဲ့ အလျှင်အမြန်အင်အားကြီးလာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး နဲ့ PSG တို့ကို လှောင်ပြောင် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန် အကြီးအကဲ
Next Article အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကနေ တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန် ယူနိုက်တက်စတားတစ်ဦးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဘော့စနစ်